Iindaba - Ukunyuka kwexabiso leCobalt kudlulile kokulindelweyo okanye kuya kubuyela kwinqanaba elifanelekileyo
Kwikota yesibini ye-2020, inani elipheleleyo lokungenisa izinto ze-cobalt eziluhlaza yayiziitoni ezingama-16800, kunye nokwehla konyaka-nge-19% ngonyaka. Phakathi kwazo, inani lilonke lokungenisa elizweni le-octobic yayiziitoni ezili-0100 zeetoni zentsimbi, kunye nokwehla konyaka ngama-92%; ukungeniswa okupheleleyo kweemveliso eziphakathi ze-cobalt hydrometallurgy yayiziitoni ezingama-15800 zeetoni zentsimbi, kunye nokwehla konyaka okuyi-15%; Isixa esipheleleyo sokungeniswa kwecobalt eluhlaza sasiziitoni ezingama-0800 zeetoni zentsimbi, kunye nonyuso lonyaka nonyaka lwama-57%.
Ixabiso le-cobalt kwiimarike zasekhaya likhuphuke kakhulu. Ukusukela embindini kaJulayi, amaxabiso e-electrolytic cobalt, i-cobalt sulphate kunye ne-cobalt chloride inyuke phantse nge-10% -11%, ephezulu kunaleyo idlulileyo yexesha lika-Meyi kaJuni. Ukunyuka kwamaxabiso e-electrolytic cobalt, i-cobalt sulfate kunye ne-cobalt chloride ukusuka ngoMeyi ukuya kuJuni zimalunga ne-3-4% kuphela.
Utshintsho lwamaxabiso eemveliso zeCMM zeCobalt ukusuka ngoMeyi 8 ukuya kuJulayi 31, 2020
Emva kwaphakathi kuJuni, ixabiso elithile le-electrobtic cobalt kwi-cobalt sulphate ngokuthe ngcembe ithambekele kwi-1, ikakhulu ngenxa yemfuno yezinto zebhetri
Ukuthelekiswa kweemveliso zeCobalt zeSMM ukusukela ngoMeyi 8 ukuya kuJulayi 31, 2020
Ukusukela ngoMeyi ukuya kuJuni kulo nyaka, ekuphela kwento exhasa ukunyuka kwamaxabiso yayikukuvalwa koMzantsi Afrika ngo-Epreli, kunye nokunqongophala kwezinto zecobalt zasekhaya ezivela ngoMeyi ukuya kuJuni. Nangona kunjalo, iimarike zasekhaya zokunyibilikisa imveliso zisisiseko, i-cobalt sulphate yaqala ukubonakala ngenyanga yokugcina izinto, iziseko ziphuculwe. Imfuno esezantsi ayikhange iphucule ngokubonakalayo, ngaphezulu kwe-3C yemfuno yedijithali yokuthenga ngaphandle kwexesha, ukunyuka kwexabiso bekuncinci.
Ngo-18650 uNimh, 3.7 Ibhetri egcwalisekayo, ILithium Ion Polymer Ibhetri, Ibhetri ye-12v yeLithium Ion enokutsha, Li Ibhetri, Ipakethe yeLithium yebhetri eyi-12 yeVolthi, Zonke iiMveliso